Aiza no handeha hiala sasatra any Espana: Toerana dimy eto amin'ny firenentsika | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 01/10/2021 11:30 | Toerana fitsangatsanganana, España
Ny valin'ny fanontaniana aiza no handeha hiala sasatra any Espana maro io. Izany hoe, tsy manaiky valiny iray akory. Ny firenentsika dia feno toerana mahafinaritra ahafahana mankafy andro vitsivitsy fialantsasatra. Avy any avaratra miaraka amin'ny toetrany maintso, ny morontsiraka mikitoantoana ary ny sakafo matsiro atsimo miaraka amin'ny toetrandro mahaliana, ny fifalian'ny olony sy ny morontsiraka fasika midadasika, dia mendrika fitsidihana rehetra i Espana rehetra.
Ary izany rehetra izany tsy miresaka momba ny tantara Castilla y Aragon, ny masoandro Valencia (eto avelanay ianao lahatsoratra momba ity tanàna ity) na ny tokana Katalonia. Na izany aza, hanolotra toerana dimy izahay handehanany sasatra any Espana.
1 Toerana tsy manam-paharoa dimy handany fialan-tsasatra tsy hay hadinoina
1.1 San Sebastián sy ny morontsirak'i Basque
1.1.1 Ny morontsiraka basque
1.2 Córdoba sy ny tanànany, anisan'ny toerana tena ilaina hanaovana fialan-tsasatra tsara
1.2.1 Tanànan'i Córdoba
1.3 Ilay Murcia tsy fantatra, toerana iray hafa fialan-tsasatra any Espana
1.5 Ny tanànan'i Soria
Toerana tsy manam-paharoa dimy handany fialan-tsasatra tsy hay hadinoina
Ho an'izay rehetra nolazainay taminao, izahay dia hanao ezaka synthesis mba hanolorana toerana dimy hahafahanao mankafy tsy hay hadinoina fialantsasatra any Espana. Hataonay antoka fa an'ny faritra rehetra eto amin'ny firenentsika izy ireo ary izy ireo dia solontena araka izay azo atao amin'ny fahasamihafana marobe.
San Sebastián sy ny morontsirak'i Basque
Hanomboka ny avaratry ny Espana izahay. Azontsika atao ny milaza aminao ny momba ilay tsangambato Santander, avy amin'ny tantara Asturias na an'ny sarobidy Morontsiraka Galisiana. Fa izahay no nifidy ny renivohitry Guipúzcoa satria, araka ny hevitray, izy dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Espana.
Tsy kisendrasendra fa io no iray amin'ireo toerana fitsangatsanganana notsidihina indrindra nandritra ny tantarantsika. Ilay sarobidy La Concha bay, miaraka amoron-dranomasina, dia toerana fandroana na dia ho an'ny mpanjaka aza ary maro amin'ireo tranony no mamaly izany famirapiratana ara-tantara izany.
Azonao atao ny manomboka ny fitsidihanao an'i San Sebastián amin'ny tapany taloha, miaraka amin'ny seranan-tsambony sy ny arabe tery voaravaka feno trano fisotroana ahafahanao mankafy ilay malaza pintxos. Manoro hevitra anao ihany koa izahay mba hitsidika ny basilica Baroque manaitra an'i Santa María del Coro sy ny fiangonana Gothic ao San Vicente. Ho hitanao ato amin'ity faritra ity ihany koa ny tranombakoka an'i San Telmo, momba ny tantaran'i Basque, ary Naval. Aza adino koa ny miakatra amin'ny tendrombohitra Urgull, izay ahafahanao mankasitraka fomba fijery miavaka momba ny bay.
Na izany aza, angamba mbola malaza kokoa aza ilay tendrombohitra iray hafa amin'ny faran'ny mifanohitra amin'i La Concha. Miresaka aminao momba izany izahay tendrombohitra Igueldo, izay, ankoatry ny tontolo iainana, ianao dia manana voly fialamboly amin'ny fomba belle epoque miaraka amina coaster roller manina. Mba hahatongavana any, azonao atao ny mampiasa ilay funicular taloha, izay efa nanomboka tamin'ny 1912.
Farany, tsy maintsy mahita ny antso ao San Sebastián ianao faritra tantaram-pitiavana, izay mifanindran-dàlana amin'ny faritry ny fanitarana ny tanàna ary ahitana trano hatramin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo toy ny fananganana taloha ny Gran Casino, ny Teatra Victoria Eugenia na ny Hotel María Cristina. Saingy, angamba ny fananganana marika indrindra amin'ity faritry ny tanàna ity dia ny Katedraly mpiandry ondry tsara, natsangana tamin'ny 1897 taorian'ireo kanôna neo-Gothic.
Ny morontsiraka basque
Fa ny zava-mahagaga atolotry ny fialantsasatra any Guipúzcoa anao dia tsy mifarana ao San Sebastián. Manoro hevitra anao izahay hitsidika ireo tanàna akaiky eo amin'ny morontsirak'i Basque. Ary ambonin'izany rehetra izany, Hernani, izay ivon-toerana manan-tantara dia Toerana iray mahaliana ny kolontsaina; Azcoitia, miaraka amina fananganana goavambe marobe toa ny tranobeny; Hondarribia, miaraka amin'ny rindrina mametraka azy na tanàna kely fanjonoana toy ny Getaria izay ahitanao morontsiraka mahafinaritra.
Córdoba sy ny tanànany, anisan'ny toerana tena ilaina hanaovana fialan-tsasatra tsara
Raha manontany tena ianao hoe aiza no handeha hanao vakansy any Espana, dia holazainay aminao izao ny toerana tokony halehanao, fara fahakeliny, indray mandeha amin'ny fiainanao. Izahay dia miresaka momba an'i Córdoba manan-tantara, miaraka amin'ny fomban-drazana Caliphate sy ireo tsangambato mahafinaritra. Tsy kisendrasendra fa izy no tanàna manana anaram-boninahitra betsaka indrindra Lova manerantany izao tontolo izao.
Niorina ny Romanina tamin'ny taonjato faharoa talohan'i JK, i Córdoba dia manana tsangambato maro hatramin'ny vanim-potoana rehetra, na dia niaina tamin'ny vanim-potoana tsara nanjakan'ny Silamo aza, fony izy renivohitry ny Kalifa.
Ny teatra romana, tetezana ary tempoly, ankoatry ny fananganana hafa, dia an'ny vanim-potoana latina. Fa ny mariky ny tanàna no malaza Mosque, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny sisa tavela tamin'ny fiangonana Visigoth taloha. Raha izy irery dia ampy ny antony hitsidihanao an'i Córdoba.
Na ankehitriny aza dia io no fahatelo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao aorian'ny Mekka sy ny moskea Istanbul, na dia katedraly katolika aza izao. Anisan'ireo hitanao ao ny Patio de los Naranjos, ny tilikambo lakolosy Renaissance, ny varavarana maro toa ny Postigo del Palacio na ny Santa Catalina ary ny efitrano hypostyle malaza. Fa koa ny amboarampeo, ny alitara lehibe na ny mahatalanjona macsura.
Araka ny efa noheverinao fa tsy ny Moske irery no tsangambato tamin'ny vanim-potoana Silamo hitanao tao Córdoba. Anisan'izany ny fikosoham-bary any Guadalquivir na ny fandroana Caliphate. Fa ny tena manan-danja kokoa dia ny fametrahana Medina Azahara.
Any amin'ny valo kilometatra eo ho eo miala an'i Córdoba, eo am-pototry ny Sierra Morena, dia tanàna palatine taloha naorin'ny kalifa Abderramán III. Na eo aza ny taonany, voatahiry tsara izy io. Anisan'ireo zava-mahatalanjona hitanao ao ny Great Portico, ilay tranobe basilica ambony, ny Rich Room na ny tranon'i Jafar.
Fahitana an'i Almodóvar del Río
Satria any Córdoba ianao, dia manoro hevitra anao izahay mba hitsidika ny tanàna toa Montilla, miaraka amin'ireo sisa tavela amin'ny tranony taloha; Làlana, miaraka amin'ireo sisa tavela Arabo, ary Priego, miaraka amin'ny manodidina azy amin'ny La Villa sy ny Balkona Adarve. Fa koa Baena, miaraka amin'ireo sisa tavela amin'ny arkeolojika; Zuheros, izay misy ny Cave of the Bats; Almodóvar del Río, miaraka amin'ny fiangonana taonjato faha-XNUMX, ary Hornachuelos, miaraka amin'ny lapany sy ny zaridainan'i Moratalla, fantatra amin'ny anarana hoe «The Versailles of Córdoba».
Ilay Murcia tsy fantatra, toerana iray hafa fialan-tsasatra any Espana
Murcia (calle Trapería), toerana tsara handehanana miala sasatra any Espana
Murcia dia tsy isan'ny toerana fizahan-tany indrindra eto amin'ny firenentsika. Na izany aza, betsaka ny zavatra azo atolotra anao. Ary tsy miresaka momba ny morontsiraka mahafinaritra azy fotsiny isika, indrindra ireo any amin'ny manodidina azy La Manga del Mar Menor, na ny toetrany mafana sy mahafinaritra.
Ny renivohi-paritany dia manana komplex monumental. Ny tanàna taloha, manodidina ny Kianja Kardinaly Belluga, liana be. Misy ny katedraly santa maria, izay manambatra ny gothic, Renaissance ary, ambonin'izany rehetra izany, ny fomba Baroque. Ho fanampin'izany, ny lakolosy lakolosy mahavariana, 93 metatra ny haavony, no tandindon'ny tanàna.
Eo akaikin'ny katedraly dia misy ny taloha Seminera lehibe ao San Fulgencio ary ny Lapan'ny episkopaly, samy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Saingy tokony handehandeha mamaky ny arabe mpandeha an-tongotra eto afovoany ianao, toa ny ny volafotsy sy ny Trapería. Amin'ny voalohany, afaka mahita tranobe maoderina maro toa ny tranombarotra La Alegría de la Huerta taloha ianao, raha ny faharoa kosa dia miavaka ny lapan'i Almodóvar sy ny Gran Casino.
Etsy ankilany, trano iray hafa manan-danja indrindra any Murcia ny Monasiteran'i Santa Clara la Real, izay ao anatiny, ankoatr'izay, ny sisa tavela amin'ny Alcázar Araho, lapan'ny Arabo tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo, ary manolotra anao ny tranombakoka misy zavakanto masina sy Andalosiana.
Raha fintinina dia manoro hevitra anao koa izahay hahita ao an-tanànan'i Segura izany lapa sy tranobe maoderina. Anisan'ireo voalohany, ireo an'ny fianakavian'i Pérez-Calvillo, Vinader, Fontes ary Almudí. Ary, mikasika ity farany, ny trano Díaz-Cassou, Almansa, Guillamón ary ny Mercado de Verónicas.
Nolazainay taminao ny toerana handehananao fialan-tsasatra any Espana izay any avaratra sy atsimo ary atsinanana. Hanao izany isika avy amin'ny tanàna tsara tarehy izay any andrefana. Miresaka an'i Ciudad Rodrigo izahay, nambara avokoa Toerana kanto manan-tantara.
Tsy ho gaga amin'ny fanekena ianao raha milaza aminao izahay fa ny lovany goavana dia manomboka irery manda, izay mbola voatahiry saika mitohy mandraka androany. Efa ao anaty tanàna ianao dia manana fahagagana toa azy lapan'i Henry II, tamin'ny taonjato faha-XNUMX; ny Town Hall, Fomba Renaissance, na ny Hopitaly Passion.
Saingy misy an'i Ciudad Rodrigo miaraka amina maritrano ara-pivavahana manan-danja ihany koa. Misongadina ao izy katedraly santa maria, Asa Romanesque fifindrana mankany Gothic ary ny Main Chapel misy alitara espaniola-Flemish mahatalanjona. Tokony hitsidika ireo fiangonan'i San Andrés sy San Cristóbal ary ilay olona mahavariana ihany koa ianao Chapel of Cerralbo, an'ny fomban'ny Herrerian, ary koa ny masinina an'i San Agustín sy ny Seminera ao San Cayetano.
Ary farany, niverina tany amin'ny maritrano sivily izahay, ary nanolo-kevitra ny hitsidika ny trano Vázquez sy Cadena ary ny lapan'ny Marchioness of Cartago sy águila ao Ciudad Rodrigo.
Ny tanànan'i Soria
Làlana iray any Calatañazor
Mandehandeha any ambanivohitra Espana izahay izao hanolotra ny dia amin'ny tanànan'ny Soria, izay ny sasany amin'izy ireo dia anisan'ireo tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena. Miresaka aminao izahay momba ny toerana toa Burgo de Osma, miaraka amin'ny Katedraly Santa María de la Asunción mahatalanjona, ny hopitaly taloha de San Agustín sy ny tranony, izay sisa tavela dia voatahiry.
Fa miresaka tanàna toa izany koa izahay Catalañazor, izay mitazona ny hatsaran-tarehiny medieval rehetra; Medinaceli, miaraka amin'ny tranobeny, ny lapan'ny ducal ary ny fiangonana misy azy, na Almazán, miaraka amin'ny lova Romanesque lehibe.
Ary na ny hafa tsy dia fantatra loatra hoe Yanguas, izay manana trano mimanda ihany koa; Rello, miorina amin'ny vatolampy vatosokay, na Monteagudo de las Vicarías, izay, raha tsy misy trano mimanda, dia misy roa: ny an'ny La Raya sy ny Palacio de la Recompensa. Izany rehetra izany nefa tsy manadino ireo fahagagana voajanahary toy ny Vinuesa, miorina eo am-pototry ny tampon'ny Urbión sy ilay Laguna Negra malaza.
Ho famaranana, toerana dimy no efa nolazainay taminao aiza no handeha hiala sasatra any Espana. Fa ny harena sy ny fahasamihafana eto amin'ny firenentsika dia tena lehibe ka afaka nanolotra anao bebe kokoa izahay. Ohatra, ny sarobidy Costa brava, fitsidihana ny Tanànan'ny Cadiz (eto ianao lahatsoratra momba azy ireo), tanàn-dehibe mampiavaka an'i Burgos na ny Galisiana Rías Altas y Bajas. Tsy heverinao ho toeran-kaleha mahafinaritra ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Aiza no handeha hiala sasatra any Espana?